Umaka: i-dropbox | Martech Zone
Umaki: ibhokisi lokudonsa
I-Figma: Idizayini, i-Prototype, kanye nokuBambisana kwezebhizinisi
NgoLwesithathu, July 31, 2019 NgoLwesibili, ngoJulayi 30, i-2019 Douglas Karr
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, bengisiza ukuthuthukisa nokuhlanganisa isibonelo esenziwe ngokwezifiso se-WordPress seklayenti. Kulinganiselwe isitayela, ukunweba i-WordPress ngokusebenzisa izinkambu zenkambiso, izinhlobo zeposi yangokwezifiso, uhlaka lokuklama, ingqikithi yengane, nama-plugins wangokwezifiso. Ingxenye enzima ukuthi ngiyayenza kusuka kuma-mockups alula kusuka kupulatifomu yokuphathelene yokuvikela. Yize kuyipulatifomu eqinile yokubuka nokuklama, ayihumushi kalula ku-HTML5 naku-CSS3.
I-Wrike: Khulisa Ukukhiqiza, Ukusebenzisana, futhi Uhlanganise Ukukhiqizwa Kwakho Kokuqukethwe
NgoLwesihlanu, Okthoba 23, 2015 NgoMsombuluko, Disemba 7, 2020 Douglas Karr
Angiqiniseki ukuthi yini esizokwazi ukuyenza ngaphandle kwenkundla yokubambisana yokukhiqiza okuqukethwe kwethu. Njengoba sisebenza kuma-infographics, amaphepha amhlophe, kanye nokuthunyelwe kwebhulogi, inqubo yethu isuka kubacwaningi, iye kubabhali, kuya kubaklami, kubahleli namakhasimende ethu. Labo bantu baningi kakhulu ababandakanyekile ukudlulisa amafayela emuva naphambili phakathi kweGoogle Docs, iDropBox noma i-imeyili. Sidinga izinqubo nokuvuselelwa ukuze sithuthukise inqubekela phambili kokuningi kwe-
NgoLwesithathu, Agasti 26, 2015 NgoLwesihlanu, Agasti 28, 2015 Douglas Karr
Ukusebenzisa izithombe ngempumelelo ku-inthanethi kuzothuthukisa ukuthengiswa kwakho kwe-e-commerce, ukufinyelela kwakho kokushicilelwa, noma ibhizinisi lakho. Uma inkampani yakho isebenza emkhakheni obonakalayo wezithombe, ukudla, imfashini noma ukukhuthazwa komcimbi, usuvele usebenza ukwaba okuqukethwe okubukwayo ku-inthanethi. Okubukwayo kulawula i-inthanethi - kusuka kokuphakelayo kwakho kwe-Facebook kuye ku-Pinterest. Ukubukeka kufakazelwe ukushayela ukuchofoza, ukwabelana, ukuqonda nokuguqula. Inkinga yamabhizinisi amaningi ukuthi uziphatha kanjani izinsiza zesithombe - kusuka ku-